bamka hoostiisa birta aan la taaban karin
Bambooyin slurry ah oo toosan
matoorrada slurry sump toosan
Biyo-mareenka biyo-mareenka ah
Bambooyin maraq toosan
Bambooyin Froth Toosan
Bambada Ciidda Dhagax-jeexa
Qaybaha bamka ee Slurry
Qaybaha bamka birta
Qaybaha bamka caagga ah
Qaybaha bamka polyurethane
SiC Ceramic Slurry Pump Qaybaha
Bamka biyaha ee horizontal
Bamka nuugista laba jibaaran
Bamka biyaha badan
Dhuumaha Biyaha Bamka
Bamka bullaacadaha ee horizontal
Bamka bullaacadaha hoostiisa
Buluug toosan oo bulaacad ah
Bamka kiimikada fluoroplastic
API610 bamka kiimikada
Bambada Centrifugal ee is-daba-marin
Taxanaha YZQ Haydarooliga biyaha shubaya
Bamka Biyaha Wasaqda Biyaha ee WQP Aan Aan Wasagsanayn
Qeybaha Froth Pump Qeybaha
Bamka Froth Horizontal
D, DM, DF, DY taxane ah bamka centrifugal multistage
Taxanaha TZX High Head Slurry Pump
Nooca UHB-ZK Daxalka iska caabinta Hoobiye dhoobada ah
TZM TZS Taxanaha Slurry Pump
Filter Horizontal Filter Press Feed Pump
VS Sump Slurry Pump
Qaybaha bamka ee polyurethane PU
TZG(H) Taxanaha Bamamka Ciidda Quruxda
bamka dareeraha caagga ah ee xidhashada u adkaysta
Taxanaha TZSA Compact Slurry Pump
QJ Bamka birta ah ee si fiican hoos u dhigi karta (Bamka ceelka qoto dheer) sharaxaada alaabta
QJ-Nooca submersible bamka waa matoor iyo bamka biyaha si toos ah u galaya biyaha shaqada qalabka qaadista biyaha, waxay ku haboon tahay in laga soo saaro ceelasha qoto dheer ee biyaha dhulka hoose sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa wabiyada, kaydadka, bullaacadaha iyo mashaariicda kale ee biyaha kor u qaadida: inta badan waraabka dhul-beereed iyo buurta dhulka ee biyaha dadka iyo xoolaha, laakiin sidoo kale magaalooyinka, warshadaha, tareenada, miinooyinka, goobta isticmaalka biyaha.
QJ Sifooyinka birta aan fiicnayn ee bamka biyaha hoosisa
1. matoor, bamka biyaha mid, si dhuumasho ah u gala biyaha si aad u ordo, badbaado leh oo la isku halayn karo.
2. Ma jirto shuruud gaar ah oo loo baahan yahay tuubada ceelka iyo tuubada biyaha (tusaale, ceelka birta, ceelka dambaska, ceelka ciidda iyo wixii la mid ah ayaa loo isticmaali karaa; iyadoo la raacayo ogolaanshaha cadaadiska, tuubada birta, tuubada, Dhuumaha caagga ah iyo wixii la mid ah ayaa laga yaabaa inay u adeegaan sida tuubada biyaha).
3. Rakibaadda, isticmaalka, dayactirka fudud fudud, raad yar, looma baahna in la dhiso qolka bamka.
4. Qaab dhismeedka fudud, kaydinta alaabta ceeriin.
Isticmaalka bamka hoostiisa ee shuruudaha ayaa ku habboon, maaraynta saxda ah iyo nolosha xiriirka tooska ah.
QJ Bamka birta ah ee si fiican hoos u dhigi karta (Bamka ceelka qoto dheer) cshuruudaha Isticmaalka
QJ-nooca Bambooyin hoos yimaada waxa loo isticmaali karaa si joogto ah xaaladaha soo socda:
1. Saddex-waji oo koronto AC ah oo leh inta jeer ee la qiimeeyay ee 50HZ iyo danab lagu qiimeeyay 380 ± 5% V.
2. Gelitaanka bamka waa in uu ka hooseeyaa 1 mitir heerka biyaha dhaqaaqa, laakiin qoto dheer ee quusitaanka waa in aanu dhaafin 70 mitir oo ka hooseeya heerka biyaha. Dhamaadka hoose ee mishiinka ayaa ugu yaraan 1 mitir ka sarreeya qoto dheer ee biyaha hoose.
3. Heerkulka biyuhu guud ahaan kama sarreeyo 20 ℃.
4. Shuruudaha tayada biyaha: (1) Maaddada biyaha ee aan ka badnayn 0.01% (miisaanka miisaanka);
(2) Qiimaha PH ee u dhexeeya 6.5 ~ 8.5;
(3) Waxa ku jira koloriin aan ka badnayn 400 mg/l.
5. Waxay u baahan tahay qiimo togan, darbigu waa siman yahay, ma jiro si fiican loo baraarugay.
QJ Birta aan birta lahayn ee si fiican hoos u dhigi karta (bamka ceelka qotada dheer) sharaxaadda qaabdhismeedka
1.QJ-nooca bamka hoostiisa wuxuu ka kooban yahay: bamka biyaha, matoorka hoos u dhigaya (oo ay ku jiraan fiilada), tuubooyinka biyaha iyo furaha kontoroolka oo ka kooban afar qaybood.
Bamka Submersible ee bamka dhexe ee heerka-badan ee hal-muugista: matoorka submersible ee biyo-xidhan ee qoyan, matoorka saddex-waji ah ee qafis asynchronous, matoor iyo bamka dhex mara cidiyaha ama durbaanka keliya ee si toos ah isku xidhaya; ku qalabaysan tilmaamo kala duwan oo ka mid ah saddexda cable Core; qalabka bilawga ah ee heerarka kala duwan ee awoodda kala duwan ee wareejinta hawada iyo is-dejinta bilawga, tuubada biyaha ee dhexroorka kala duwan ee tuubada birta ee ka samaysan isku xirka flange, bamka sare ee sare leh oo leh xakamaynta albaabka.
2. Bamka Hooseeya Marxalad kasta oo baffle ah waxaa lagu rakibay caag; impeller-ku wuxuu ku go'an yahay bamka bamka oo leh gacmo duuban; maan-gaabku waa dunta ama waa la xidhay.
3. Bamka sare-sare ee hoos-u-qaadista oo leh waalka hubinta ee qaybta sare, si looga fogaado hoos u dhaca uu sababay dhaawaca unugga.
4. Matoor-hoosaad matoor leh oo leh meel ciid shaybaadh ah iyo laba isku-duwan oo ah shaabadda saliidda qalfoofka, si looga hortago socodka ciidda matoorka.
5. Matoorka hoostiisa leh ee biyaha dufan leh, qaybta hoose ee cadaadiska caagga ah ee xakameynaya filimka, cadaadiska xakameynaya guga, oo ka kooban qolka qalliinka, hagaajinta cadaadiska ay sababaan isbeddellada heerkulka; matoorka dahaarka leh ee polyetylenka, jaakad naylon ah oo raagaya alaabta macaamiisha, Xidhiidhka fiilada ee tignoolajiyada xidhiidhiyaha fiilada ee nooca QJ ah, dahaadhka xidhiidhiyaha ee lakabka rinjiga xoqaya, ayaa la xidhay, si adag alxanka, iyo caag cayriin ah oo ku wareegsan lakabka. Ka dibna lagu duuduubo cajalad dhejis ah oo aan biyaha u adkaysan karin 2 ilaa 3 lakab, oo ka baxsan xirmada 2 ilaa 3 lakab ee cajalado aan biyuhu lahayn ama koollo leh lakabka cajalad caag ah (suunka baaskiilka) si looga hortago in biyuhu dillaacaan.
6. Matoorku waa la shaabadeeyey, lagu xidhay boodh joogsi sax ah iyo fiilada.
7. Cidhifka sare ee matoorku wuxuu leeyahay dalool biyaha lagu duro, waxaa jira dalool hawo leh, qaybta hoose ee godka biyaha.
8. Qaybta hoose ee matoorka oo leh dabada sare iyo hoose, dabada ku riixaysa jeexdin si ay u qaboojiso, oo waxa ay shiidisaa saxanka birta ah ee birta ah, oo leh bamka kor iyo hoosba xoogga axial.
QJ Bamka birta ah ee si fiican hoos u dhigi karta (Bamka ceelka qoto dheer) mabda'a shaqada
Kahor inta aan la furin bamka, tuubada nuugista iyo bamka waa in lagu buuxiyaa dareere. Ka dib marka bamka la shubo, impeller-ku wuxuu ku wareegayaa xawaare sare, dareeruhuna wuxuu la wareegayaa daabka. Marka la eego ficilka xoogga centrifugal, waxay ka tagtaa impeller-ka dibadda oo dareeraha ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaya cadaadiska si tartiib tartiib ah ayuu u korayaa bamka Dhoofinta, qulqulka tuubada. Halkaa marka ay marayso, xarunta dhexe ee daab ee xarunta dareeraha ah waxaa lagu tuuraa hareeraha iyo samaynta labadaba hawo iyo wax dareere ah oo aan lahayn vacuum aagga cadaadiska hooseeya, barkadda dareeraha ee barkada cadaadiska atmospheric ee hoos yimaada ficilka nuugista Tuubbada gasha bamka, dareeruhu si joogto ah ayuu u socdaa Si joogto ah ayaa laga soo nuugaa barkada dareeraha ah oo si joogto ah uga soo qulqulaya tuubada dheecaanka.
QJ birta aan fiicnayn ee si fiican hoos u dhigi karta (bamka ceelka qotada dheer) use iyo sifooyinka
Bamka hoos yimaada nooca QJ wuxuu ku salaysan yahay halbeegyada qaranka ee loo qaabeeyey wax soo saarka tamarta-badbaadinta, oo si weyn loogu isticmaalo waraabka dhul-beereedka, warshadaha iyo warshadaha macdanta ee sahayda biyaha iyo biyo-mareenka, dhulka buuraleyda ah, biyaha xoolaha.
Bamka waxa uu ka kooban yahay QJ submersible pump iyo YQS matoorka hoos u dhigi kara mid ka mid ah biyaha hoostooda si uu uga shaqeeyo biyaha hoostooda. Iyada oo qaab dhismeed fudud, cabbir yar, miisaan fudud, rakibid, dayactir fudud, hawlgal ammaan ah, la isku halleyn karo, tamar tayo leh iyo wixii la mid ah.
Taxanaha QJR ee bamamka kulaylka u adkaysta ayaa si fiican u leh quusitaanka kulaylka u adkaysta saddex-waji asynchronous motor si toos ah mid ka mid ah, oo la isugu keenay bamka kulaylka adkaysi u leh, heerkulka biyaha kulul ilaa 100 ° C, ayaa lagu quusiyaa ceelka. , Biyuhu waa qalab wax ku ool ah; geothermal waa mid ka mid ah tamarta ugu raqiisan, nadiif ah, aan la koobi karin, hadda si weyn loogu isticmaalo kuleylka, caafimaadka, qubayska, taranta, beeritaanka, warshadaha iyo beeraha, warshadaha iyo macdanta, adeegyada madadaalada, xarumaha caafimaadka, dhinac. Waxay leedahay faa'iidooyinka hawlgalka fudud, hawlgal lagu kalsoonaan karo, buuq la'aan, wax qabad aad u fiican, waxtarka sare ee cutubka, rakibida fudud iyo dayactirka. Waxay leedahay faa'iidooyin badan sida caabbinta kulaylka, iska caabinta daxalka iyo gabowga ka hortagga. Waa badeecadii ugu dambeysay ee biyo kulul oo qarka u saaran.
1. Isticmaalka toosan, sida ceelka caadiga ah;
2. Isticmaalka qasabka ah, sida miinada oo leh waddo jilcan;
3. Isticmaalka tooska ah, sida barkada dhexdeeda
Bamka korantada ee ceelka (Bamka ceelka qotodheer) ee taxadarka leh
1. Bambooyin si fiican loo submerable waa in loo isticmaalaa in content ciidda in ka yar 0.01% ee isha biyaha, qolka bamka qalabaysan haanta biyaha ka hor, awoodda waa in ay la kulmaan bilowga ah ee biyaha ka hor.
2. Matoorka ceelka qoto dheer ee cusub ama dib loo habeeyay, waa inuu hagaajiyaa qolofta bamka iyo nadiifinta impeller, impeller-ka hawlgalka waa inuusan ku dhicin qolofka.
3. Bamka ceelka qotodheer waa inuu socdaa ka hor inta aanay biyuhu gelin usheeda dhexe oo uu sido qolofka hore loogu sii ordi lahaa.
4. Ka hor inta aan la bilaabin bamka ceelka qoto dheer, alaabta kormeerku waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
1) boolal-saldhig ayaa la adkeeyay;
2) nadiifinta axial si ay u buuxiso shuruudaha, hagaajiso nuts bolt ayaa la rakibay;
3) qanjidhka baakadku waa la adkeeyay oo la subkay;
4) Gawaarida matoorka ayaa la saliiday;
5) U rog rotor-ka mootada iyo habka joogsiga gacanta waa kuwo dabacsan oo waxtar leh.
5. Bamka ceelka qotodheer ma noqon karo mid shaqo la'aan ah kiiska biyaha. Tuubbooyinka Hal ama laba matoobiyeyaasha waa in la geliyo meel ka hooseysa heerka biyaha 1m. Hawlgalku waa inuu had iyo jeer la socdaa isbeddelka heerka biyaha ee ceelka.
6. Inta lagu jiro hawlgalka, markaad hesho gariir weyn oo ku wareegsan aasaaska, waa inaad hubisaa xirmada bamka ama buuxinta mashiinka; marka xad-dhaafka ah ee xirashada iyo daadinta, waa in la beddelo qaybaha cusub.
7. waa la nuugay, lagu shubay bamka ceelka dhoobada ah, ka hor inta aan la joojin bamka, codsiga biyo raaci.
8. Kahor intaadan joojin bamka, waa inaad xirtaa waalka biyaha, jar korontada, xir sanduuqa beddelka. Marka jiilaalku naafo yahay, biyaha waa in lagu dhejiyaa bamka.
Afeef: Hantida garaadka ee lagu muujiyay alaabta(yada) liiska waxaa iska leh qolo saddexaad. Alaabooyinkan waxa kaliya oo loo bixiyaa tusaale ahaan awoodahayada wax soo saarka, ee maaha iib.
Hore: Shirkadaha Dhoofinta Pump Pump ee ugu Fiican Shiinaha - Nooca SYB-ga ee Digaga Iskuduwida La Wanaajiyey - Boda
Xiga: Antiabrasive Slurry Qiimaha
12v Bamka Biyaha
1 hp bamka biyaha
2 hp Bamka Biyaha
5 hp Bamka Biyaha
Bambada Biyaha Tooska ah
Bamka Biyaha Ku Shaqeeya Battery
Dc Bamka Biyaha
Bambada Biyaha Ceelka Qoto dheer
Bamka Naaftada Biyaha
Dhuuqida Laba-jibbaarka Biyaha
Bambada Biyaha Korontada
Bamka Biyaha Beerta
Bamka Biyaha Ku shaqeeya ee Gaaska
Bamka Biyaha Gacanta
Bamka Biyaha Cadaadiska Sare
Bamka Wareega Biyaha Kulul
Bambada Biyaha Kulul
Bamka Dib-u-wareejinta Biyaha Kulul
Nidaamka Wareega Wareega ee Biyaha Kulul
Buubka Biyaha ee gacanta
Bamka Biyaha ee Birta
Bamka Biyaha Shidaalka
Bamka biyaha la qaadi karo
Rv Bamka Biyaha
Bambada Biyaha ee Is-doorashada
Bamka Biyaha Ku Shaqeeya Cadceedda
Bambada Isha Biyaha Cadceedda
Bamka Biyaha Hooseeya
Bamka Kobciyaha Biyaha
Bamka Muuqaalka Biyaha
Bambada Isha Biyaha
Biyaha Jet Pump
Bamka Awoodda Biyaha
Kobciyaha Cadaadiska Biyaha
Bamka Kobciyaha Cadaadiska Biyaha
Haanta Cadaadiska Biyaha
Aquarium-ka Biyaha Biyaha
Bamka Biyaha ee Guriga
Mashiinka Tuubbada Biyaha
Koofida Caagga ah ee Biyaha Biyaha
Xirmada Bamka Biyaha Biyaha
Bamka Nuugista Biyaha
Haanta Biyaha ee Bambada
Bamka Gudbinta Biyaha
Riix Biyaha Ceelka
Qaybaha bamka slurry abrasive Slurry Pump Impeller
PWL Pump Bulaacadaha
Nooca SFX-Isku-doorka La Wanaajiyey
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd waa shirkad ka shaqeysa suuqa bamka caalamiga ah ee PRC. Waxay inta badan ku shaqeysaa bamka & qalabka lagu kaxeeyo bamka, qeybaha bamka & caabbinta xirashada shubka, kuwa kale mashiinnada hawo-biyoodka, agabka iwm.
Waqooyiga Tuulada Shilipu, Degmada Chang'an, Shijiazhuang, Shiinaha.